Uluhlu lweSoftware endiyijongileyo-iGeofumadas
Ikhaya/Geospatial - GIS/Uluhlu lweSoftware ndiyifake
Geospatial - GISINDEXegeomates My
Ndathetha kutshanje oko kuthetha ntoni kwiinkcukacha zokuthetha ngeprogram, ngokukodwa 11 iinkqubo ezimele i-50% yotyelelo luye ngegama elingundoqo. Kunzima ukunika iingcebiso ukuba yeyiphi isoftware ebhetele, kuba ixhomekeke kwiimeko ezahlukeneyo zomxholo (kunye nemali), eyona ndinethemba layo kukubhala kwaye ndinike umbono wam; abanye bazenzele ezabo. Ngelishwa ukuba ibhlog, izinto ezithile zombhali zibalulekile kumxholo, ezinje ngokuhlekisa, umonde, isigqebelo, ngaphandle kwazo umhlaba unokuba yinto ebambekayo ... yenzelwe) ngaphezulu kokuqhwaba izandla.
I-6 yam intando Kukho imiboniso emithandathu endihlala ndithetha ngayo, kwaye iyintandokazi yam; Kwezinye iimeko ukusetyenziswa ngakumbi kunokwoneliseka okanye njengoko uJ esitsho, ngaphezulu komkhwa kunokonwaba. Kwisiqingatha soku-odola ivenkile yomxholo endiyenzileyo maphepha. Ezi nkqubo ze-6 zi:
I-AutoCAD (iposi ye-178)
Izithuba ezili-178 azibhekiseli kuphela kwisixhobo esisisiseko, kodwa iMephu ye-AutoCAD, i-Civil 3D, iSoftdesk 8, i-AutoCAD WS, i-CivilCAD, i-Plex. Umhlaba kunye nezinye izithuba zikomnye umxholo kodwa zibandakanya. Ngenxa yokuba ithandwa kakhulu, kwaye isixhobo sokuqala se-CAD endisaziyo, ndiyisebenzisa rhoqo le nkqubo. Nangona kukho iiblogi ezininzi kunye neeforamu malunga ne-AutoCAD, iindwendwe ngokubanzi ziza apha zifuna ukwazi indlela yokukhuphela i-AutoCAD mahala ...
I-Microstation (post 175)
Njenge-AutoCAD, ngaphandle kwesixhobo esisisiseko endithethe ngaso ngeMephu yeBentley, iMicrostation Geographics, iDescartes, iBentley Cadastre kunye nehlabathi liphela. Ngamanye amaxesha ndiye ndenza uthelekiso phakathi kweempawu zombini, enye imbali kunye nokugxeka ukusebenza kwabo.
I-ArcGIS (i-92 post)
Ngenxa yokuthandwa kwayo, andiyishiyanga ecaleni, nangona ibingeyiyo into endiyithandayo ngenxa yezizathu zexabiso kwinqanaba leshishini. Kwaye ngenxa yomkhwa wokuhlonipha amalungelo obunini, ndikhetha ukusebenzisa uMthombo ovulekileyo okanye izixhobo ezinexabiso eliphantsi.
I-GIS eneenkcukacha (post 89)
Ndithatha inzuzo ngakumbi kwesi sixhobo, ngenxa yezizathu zokuhlala ndisebenzisa.
I-GvSIG (iposi ye-60)
Le ifike mva kwibhlog, nangona ibindonwabisa mva nje. Kwinqanaba lezixhobo ezivulekileyo zomthombo, ndinentlonipho ngozinzo kwisithuba esiphakathi, ukuba nje uphuhliso kunye nentsebenziswano azithobeli mkhuba wabo.
I-Google Earth (iposi ye-172)
Akubonakali ngathi kunjalo kodwa ndibhale ngakumbi ngeGoogle Earth kunezinye iinkqubo, nangona phantse zihlala zinxibelelana nazo okanye usetyenziso lwewebhu. Nangona ayisosixhobo se-GIS esiqhelekileyo, igama laso ngokuqinisekileyo liyakuqinisekisa ukukhukhumala okwangoku okukhuselweyo phantsi kwegama neogeography.
Ezinye i-GIS okanye iinkqubo zokusetyenziswa ezinxulumene Ngaphandle kwezidlulileyo, ndenze ukuhlaziywa kwezinye iiprogram, ezinye zazo zifanelwe ngaphezulu kweposi, ezinye zicelo ezihambelana nomsebenzi we-GIS:
QGis, owona mthombo ovulekileyo womthombo
UDig, uphuhliso olungileyo, kodwa lukhawulelwe
Imephu, inamandla, kodwa ...
IMapper Global, lukhula kakhulu
Cadcorp, Umgca weMveliso yeGIS
Sitch Iimephu ... khuphela imifanekiso esuka kwiGoogle Earth
Uqhagamshelwano ... iinqanaba zamanqanaba kwiGoogle Earth
Imephu, isicelo esongezelelweyo
Integeo, Ubungcali Boshishino
MapExport, Ukusebenzisana neemephu zeGoogle
Fdo2fdo, ukuguqulwa kwefomathi
MapSuite, Umgca weMveliso yeGIS
Erdas Titan ... ncokola kwaye wabelane ngolwazi
MapServer, ukupapashwa kwewebhu
TatukGis Viewer, umbonisi omkhulu weedatha
Ezinye iinkqubo ze-CAD Kwimeko yeCAD, ukubuyekezwa kwam kuqulethe:
TopoCAD, Kuhle kakhulu kwi-Topography kunye noyilo
ArchiCAD, unesigaba sayo kunye neposi ye-8 ehlobene
BitCAD, ukusuka kwi-IntelliCAD line
ProgeCAD (IntelliCAD), ukhetho lwam kulo mgca
eCAD Lite, ukhetho lwe-Microstation
QCAD, ukhetho lwe Linux kunye neMac
Geo5, ICAD isetyenziswe kumatshini omhlaba
AnyDWG, ukuguqula iifayile ze-dwg
I-Photo Modeller ... ukusuka kwiifoto ukuya kumanqaku e-3D
FastCAD, ukusuka kumdali wenguqu yokuqala ye-AutoCAD
CAD Explorer, ukukhangela kwiifayile ze-CAD njenge-Google
Ares, isisombululo se-CAD se-Mac kunye ne-Linux
AutoCAD WS, AutoCAD kwi-Intanethi
Alibre, eyona nto ifanelekileyo yoyilo lwe-3D
PlexEarth Izixhobo, ukwandisa ukuxhuma i-AutoCAD ngeGoogle Earth
KwiCACC, izicelo kwi-AutoCAD yoBunjineli boLuntu kunye noPhando
Iinkqubo ezifana neGoogle Earth
I-ArcGIS Explorer, efanelekileyo kodwa enzima
Umoya wehlabathi weNASA, kakuhle, kodwa iJava (ihamba kancane)
I-MapJack, enye indlela yokujonga kwiSitalato
Ehlabathini elungileyo, idatha ngaphezulu kwamanye amazwe
Abanye baye batyunjwa ngohlaziyo okanye ngokusetyenziswa okulula, phakathi kwabo:
Umphathi weDossier ... ulawulo loxwebhu
SodelsCot, ... ukuguqula umbhalo kumsindo
Umbhali oBomi ... ukubhala ibhokhwe
Vuze ... isebenzise kunye neziphambeko
Google Crhome ... uhamba ngokuzonwabisa
IKhadi lokuKhuphela ... xa i-SD yonakaliswe
Umhlaba ... iigrafu kwiGoogle Earth
MapinXL, ... amamephu ukusuka ku-Excel
Woopra, ukujonga iiblogi ngexesha langempela
Codecompare, ukuthelekisa amaxwebhu
XYZtoCAD, ukusebenzisana ne-AutoCAD nge-Excel
TeamViewer, kwiinkxaso ezikude nge-Intanethi
MobileMapper Office, ukuthumela idatha ye-GPS
Xa kufika kwesi sixhobo, kwafika isisombululo esitsha, esilula kodwa esiluncedo kwaye ngokuqinisekileyo siya kukhula kwinani.
Blogsy, ukubhala kwi-Ipad
Gaia GPS, ukubamba iindlela
Embindini ka-2011, ukuba sishwankathela, ezingama-56 zibonakala ngathi zininzi, kodwa kuphela ezithandathu zokuqala ezinomthamo omkhulu womxholo. Uninzi lwabanye alunaso nesithuba.
Iinkqubo software %
Iinkqubo ezikhethiweyo 6 11%
Ezinye iinkqubo ze-GIS 15 27%
Ezinye iinkqubo ze-CAD 14 25%
Iinkqubo ezifana neGoogle Earth 5 9%
Ezinye iinkqubo 14 25%
Izicelo zePad 2 4%
I-3 inqwenela namhlanje
Umshicileli weGoogle, kubonakala kulula
Ngokubanzi yisoftware elungileyo. Ngelixa yayingeyoye-PitneyBowes yayikwindawo yesithandathu kudidi lokusebenziseka, mva nje kuye kwakho uphuculo oluninzi, kodwa iseyisoftware engaziwayo kwimeko ye-Hispanic.
Nestor Nieves uthi:
Uyazi i-MapInfo GIS? Andiboni iziboniso zeSIG
Ungazikhuphela kwiphepha le-Ashtech
Hola, que tal, ndoba ndingophathiswe Mapper 6 mobile, kodwa nathengisa ngam akundinikanga software ye imaphu mobile okanye intsimi yemephu mobile ndibona njani ukuba zazise le nkqubo ukuze kuphakanyiswe data kunye GPS, uye ezihambayo kuphela windows, kodwa Ndiyakuyala kwiprogram ukusebenza GPS?
Ukuba akusebenzi nje nje ngesundu
Siyabulela kunye nezibingelelo